Imibuzo ejwayelekile: Ingabe izinja zingadla amaqanda aluhlaza aphelele ngegobolondo?
Ngenkathi ushizi ungaphepha ukondla inja yakho, kunezinto ezithile okufanele uzikhumbule. Ushizi unamafutha amaningi, futhi ukondla kakhulu inja yakho njalo kungadala ukuzuza kwesisindo futhi kuholele ekukhuluphaleni. Ngabe amaqanda aluhlaza asiza izinja ukuthi zikhuluphale? Enye indlela yokwandisa ama-calories enja yakho ukubanikeza okunye kokudla kwakho. Vele uqiniseke ukuthi zicacile. Kuyathakazelisa: Ingabe inja ingachama esihlalweni sabakhubazekile?
Ungakwazi ukuhlanganisa ukudla kwezinja okumanzi nokomile? Ngenxa yobubanzi bezinzuzo ezinikezwa ukudla okumanzi nokomile, indlela yokuxuba yokuxuba ingaba yindlela engcono kakhulu yokusiza inja yakho ithole okuningi ngesikhathi sokudla. Ukuhlanganisa kokubili okumanzi nokomile ekudleni kwabo kungabanikeza okwehlukile, lapho bevezwa khona ukwakheka okwehlukile abazolingeka kakhulu ukukuzama. Ngingakwazi ukuhlanganisa iqanda elingavuthiwe ne-kibble?
Izinzuzo Zokuxuba Amaqanda Aluhlaza Nokudla Kwezinja Amaqanda angumthombo omuhle kakhulu wamaprotheni, i-linoleic acid, i-riboflavin, i-folate, i-iron, i-selenium namavithamini A no-B Ngabe amaqanda aluhlaza angayilimaza inja yami?
Ungahle ukhonze inja yakho iqanda eliluhlaza ngezikhathi ezithile ngaphandle kwezinkinga, kepha ubeka engcupheni yokuvezwa kwe-salmonella uma uhlangabezana neqanda elibi.
Futhi ukudla okuvamile kwamaqanda aluhlaza kungaholela ekushodeni kwe-biotin. Ngabe kufanele ugaye amagobongo amaqanda ezinja? Amagobolondo amaqanda kumele ome ngokuphelele ngaphambi kokugaya. Uma wondla ukudla okwenziwe ekhaya, uzofuna ukwengeza cishe isigamu sesipuni se-eggshell ephansi ngephawundi yokudla okusha.
Uma wondla kokubili ukudla okusha nokudla okuthengiswayo, vele ufake igobolondo leqanda engxenyeni entsha yokudla. Ngiwaphekela kanjani inja yami amaqanda? Beka esikhwameni esishisayo ngamanzi amancane ukusiza ukugwema ukunamathela epanini. Nge-spatula hambisa leli qanda nxazonke, udale ukubukeka okuxakile.
Uma iqanda seliqedile, khonza inja yakho!
Omunye umuntu uma engenwa idlozi uyagula kakhulu abangwe nezibi uma nithi nimyisa lapho ezothola khona usizo afike angasizakali kuthi ekugcineni uma senimyise esangomeni sifike simtshele ukuthi kudingeka athwase. Omunye uyancipha emzimbeni kodwa ebe engaguli uma eya kodokotela bemhlolela izifo kutholakale ukuthi akanasifo kodwa kuzothi uma eya esangomeni sifike simtshele ukuthi idlozi lidla igazi lakhe ngakho kufanele athwase.
Omunye uyahayiza kube sengathi ungenwe izizwe kanti idlozi elimhayizisayo lifuna aye kothwasa. Kokunye uhayiza ahambe aze ayofika emzini wesangoma uma efika lapho afike awele emagcekeni akhona aquleke, isangoma sakulowomuzi sesizomshisela impepho sibikele amakhosi ukuthi nangu umntwana egcekeni abakhulume ukuthi uzengani layikhaya. Ube esephaphama esebikelwa ukuthi kungani ehayiza. Omunye kufika iphupho kuyena, aphuphe ekhonjiswa umuzi othile okufanele aye kothwasa kuwo, lowomuntu uyavuka ngalesosikhathi ahambe aye kulowomuzi ebusuku kodwa kuyena kusuke kuyiphupho kanti into eyenzeka ngempela.
Uzothi uma esephaphama, aphaphame esekomunye umuzi bese beyamchazela ukuthi ufike kanjani, usuke evuvukele ikakhulukazi uma ehambe ibanga elide. Uma Umuntu Engena Edlozini Isangoma esizomthwasisa sishisa impepho sibikele idlozi ukuthi kunomntwana ofikile bese siyamgeza ngezintelezi ukuze angene ekuthwaseni egezekile. Ngakusasa kuyavukwa kuyiwe kothengwa izinkukhu ezine azomiselwa ngazo izinkamba azozidla njengoba esezothwasa, kuthengwe indwangu ebovu egqokwa amathwasa, amabhakede amane kanye namakhandlela amane.
Isangoma esizomthwasisa sibamba inkukhu sihlanganise idlozi lethwasa kanye nelaso ukuze angaxwayani uma ithwasa selishaya izinkamba zalo.
Kumiswa Izinkamba Izinkamba zihlukana ngezigaba zazo kanje: Idlozi — idlozi lihambisana nenkukhu ebovu eyiqhude Indiki — indiki lihambisana nenkukhu ewumlotha Indawo — lihambisana nenkukhu eyimpangele Isithunywa — sihambisana nenkukhu emhlophe Zonke lezizinkamba zibalulekile ukuba umuntu azidle uma ethwasa ngoba zonke zisebenza umsebenzi wedlozi. Izinkamba zibekwa esigodlweni emsamo ngokulandelana kwazo bese isangoma sifake imithi yedlozi ezinkambeni kanye nezinkukhu ziqondaniswe nezinkamba zazo.
Isangoma siphehla ukhamba ngalunye siphuzise inkukhu ngayinye bese ibekwa ekhanda lethwasa, senza kanjalo kuzona zonke izinkamba size siqede. Izinkukhu ziyahlatshwa kukhishwe izinyongo ziconsiselwe ezinkambeni bese kuthi iskhumba sezinyongo ithwasa lizigwinye. Emva kwalokho liyahamba liyogeza ngegobongo bese libuya lapho ligcobe ibovu, ligqoke izingubo ezibomvu nendwangu ebovu ekhanda kanye nesiphuku.
Isiphuku Isiphuku sakhiwa ngezimpaphe zezinkukhu zonke lezi ebezihlatshiwe ngesikhathi ufakelwa amagobongo bese zifakwa ubuhlalo obumhlophe, obubomvu obuluhlaza nobuphuzi. Isiphuku sifakwa ithwasa esiphundu lisifase ngesipeleti. Ifihlo Isangoma sifihla ngento bese singena esigodlweni lapho kuhleli khona ithwasa sikhuleke emakhosini. Ithwasa lizosukuma lithathe impepho liyishise bese libiza abadala uma idlozi lalo lishesha izovele leyonto ikhanye kulona bese liyamtshela ukuthi ufihle ngento ethile.
Izinto Okumele Ithwasa Lizenze Ithwasa liyahlonipha, liyaguqa futhi uma lidla. Njalo ngehora lesithathu ekuseni ithwasa liyavuka lishise impepho, liphahle izinkamba zalo, liye kophalaza, ligeze bese libuya ligcobe ibomvu ligqoke izingubo zalo ezibomvu bese liyagida ngokwendlela yobungoma. Bese liyahamba liyokwenza umsebenzi wasekhaya. Kuze kuphele izinyanga ezintathu, emva kwezinyanga ezintathu lizobe seligeza ibomvu lingene emcakweni.
Ithwasa liyafihlelwa izinto ukuze kubonakale ukuthi seliyakwazi ukuhlola. Izinto Okungamele Lizenze Ithwasa alimemezi, alilali emini, alihlali esihlalweni futhi alilali embhedeni, alimkhulumisi umuntu womndeni engalikhungile futhi alihlangani nomndeni walo nomangabe kuvele isifo, liyafihlelwa uma kuvele isifo.
Izinto Ezingadliwa Ithwasa Ithwasa aliwadli amaqanda, ubisi, ufishi, ushizi, ingulube kanye nenyama yesiklabhu kodwa ke ezinye izangoma zenza ngenye indlela. Ukuphothula Ithwasa uma selikhishwa kumenywa izangoma bese kuyagidwa kushiswe nempepho ukubikela idlozi ukuthi ithwasa seliyagoduka.
Ithwasa limbatha ingubo, libanjwe ngengalo lize liyongena emotweni elizohamba ngayo uma sekufikwa ekhaya liyahlangatshezwa ngempepho nembuzi lamukelwe ukuthi lingene ekhaya bese izangoma zonke zingene endlini. Emva kwalokho bese beyaphuma beyokhonjiswa inkomo yezangoma esuke izohlatshwa.
Inkomo uma isihlatshwa iqale ishawe ngamashoba bese iyahlatshwa. Uma isihlatshiwe ithwasa libe seliphuza igazi lapho lisuke liphuzisa ithongo lalo uma sekuqediwe bese iyathuthwa inyama ithuthelwe esigodlweni. Ngakusasa kuba necece kugidwe esigcawini bese ithwasa limbathise umakhosi selimbonga ngokuliphatha kahle emgonqweni naye umakhosi alimbathise ithwasa eselivalelisa elifisela nezinhlahla ukuthi lisebenze kahle.
Uma selisekhaya kusuke kungaselona ithwasa kusuke sekuyisangoma, okusho ukuthi uphumelele ekuthwaseni.
Uzothi uma esephaphama, aphaphame esekomunye umuzi bese beyamchazela ukuthi ufike kanjani, usuke evuvukele ikakhulukazi uma ehambe ibanga elide.
Uma Umuntu Engena Edlozini Isangoma esizomthwasisa sishisa impepho sibikele idlozi ukuthi kunomntwana ofikile bese siyamgeza ngezintelezi ukuze angene ekuthwaseni egezekile. Ngakusasa kuyavukwa kuyiwe kothengwa izinkukhu ezine azomiselwa ngazo izinkamba azozidla njengoba esezothwasa, kuthengwe indwangu ebovu egqokwa amathwasa, amabhakede amane kanye namakhandlela amane.
Isangoma esizomthwasisa sibamba inkukhu sihlanganise idlozi lethwasa kanye nelaso ukuze angaxwayani uma ithwasa selishaya izinkamba zalo. Kumiswa Izinkamba Izinkamba zihlukana ngezigaba zazo kanje: Idlozi — idlozi lihambisana nenkukhu ebovu eyiqhude Indiki — indiki lihambisana nenkukhu ewumlotha Indawo — lihambisana nenkukhu eyimpangele Isithunywa — sihambisana nenkukhu emhlophe Zonke lezizinkamba zibalulekile ukuba umuntu azidle uma ethwasa ngoba zonke zisebenza umsebenzi wedlozi.
Izinkamba zibekwa esigodlweni emsamo ngokulandelana kwazo bese isangoma sifake imithi yedlozi ezinkambeni kanye nezinkukhu ziqondaniswe nezinkamba zazo. Isangoma siphehla ukhamba ngalunye siphuzise inkukhu ngayinye bese ibekwa ekhanda lethwasa, senza kanjalo kuzona zonke izinkamba size siqede. Izinkukhu ziyahlatshwa kukhishwe izinyongo ziconsiselwe ezinkambeni bese kuthi iskhumba sezinyongo ithwasa lizigwinye.
Emva kwalokho liyahamba liyogeza ngegobongo bese libuya lapho ligcobe ibovu, ligqoke izingubo ezibomvu nendwangu ebovu ekhanda kanye nesiphuku. Isiphuku Isiphuku sakhiwa ngezimpaphe zezinkukhu zonke lezi ebezihlatshiwe ngesikhathi ufakelwa amagobongo bese zifakwa ubuhlalo obumhlophe, obubomvu obuluhlaza nobuphuzi.
Isiphuku sifakwa ithwasa esiphundu lisifase ngesipeleti. Isangoma esizomthwasisa sibamba inkukhu sihlanganise idlozi lethwasa kanye nelaso ukuze angaxwayani uma ithwasa selishaya izinkamba zalo.
Kumiswa Izinkamba Izinkamba zihlukana ngezigaba zazo kanje: Idlozi — idlozi lihambisana nenkukhu ebovu eyiqhude Indiki — indiki lihambisana nenkukhu ewumlotha Indawo — lihambisana nenkukhu eyimpangele Isithunywa — sihambisana nenkukhu emhlophe Zonke lezizinkamba zibalulekile ukuba umuntu azidle uma ethwasa ngoba zonke zisebenza umsebenzi wedlozi.
Izinkamba zibekwa esigodlweni emsamo ngokulandelana kwazo bese isangoma sifake imithi yedlozi ezinkambeni kanye nezinkukhu ziqondaniswe nezinkamba zazo.
Isangoma siphehla ukhamba ngalunye siphuzise inkukhu ngayinye bese ibekwa ekhanda lethwasa, senza kanjalo kuzona zonke izinkamba size siqede. Izinkukhu ziyahlatshwa kukhishwe izinyongo ziconsiselwe ezinkambeni bese kuthi iskhumba sezinyongo ithwasa lizigwinye.
Isiphuku sifakwa ithwasa esiphundu lisifase ngesipeleti.
Ifihlo Isangoma sifihla ngento bese singena esigodlweni lapho kuhleli khona ithwasa sikhuleke emakhosini. Ithwasa lizosukuma lithathe impepho liyishise bese libiza abadala uma idlozi lalo lishesha izovele leyonto ikhanye kulona bese liyamtshela ukuthi ufihle ngento ethile. Izinto Okumele Ithwasa Lizenze Ithwasa liyahlonipha, liyaguqa futhi uma lidla. Njalo ngehora lesithathu ekuseni ithwasa liyavuka lishise impepho, liphahle izinkamba zalo, liye kophalaza, ligeze bese libuya ligcobe ibomvu ligqoke izingubo zalo ezibomvu bese liyagida ngokwendlela yobungoma.
Bese liyahamba liyokwenza umsebenzi wasekhaya. Kuze kuphele izinyanga ezintathu, emva kwezinyanga ezintathu lizobe seligeza ibomvu lingene emcakweni. Ithwasa liyafihlelwa izinto ukuze kubonakale ukuthi seliyakwazi ukuhlola. Izinto Okungamele Lizenze Ithwasa alimemezi, alilali emini, alihlali esihlalweni futhi alilali embhedeni, alimkhulumisi umuntu womndeni engalikhungile futhi alihlangani nomndeni walo nomangabe kuvele isifo, liyafihlelwa uma kuvele isifo.
Eritrean boy names list
Posted in Ukudla amagobongo
thoughts on “Ukudla amagobongo”